warkii.com » Isku-aadka Champions League & Europa League Ee Maanta Iyo Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato
Isku-aadka Champions League & Europa League Ee Maanta Iyo Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato
Tartanka Champions League ayaa soo laaban doona bisha August isaga oo qaabkiisu ka duwan yahay sidii lagu yaqaanay, loona habeeyey sidii tartan gaaban oo hal goob lagu dhamaystirayo.
Jimcaha maanta ayaa la samaynayaa isku-aadka wareegyada siddeed-dhamaadka, laba dhamaadka iyo finalka, kuwaas oo dhamaantood ka dhici doona magaalada Lisbon ee waddanka Portugal.
Isku-aadka ayaa la bilaabi doonaa marka ay 1-da duhurnimo waxa lagu shaacin doonaa sida ay kooxuhu u wada ciyaari doonaan wareegyada hadhay, iyadoo xisaabta lagu darayo kulamadii ka hadhsanaa wareeggii 16ka oo afar kooxood laga sugayo inay kasoo baxaan, kuwaas oo UEFA ay go’aamisay inay ka dhacaan garoomadii marka hore loo qoondeeyey si ay usoo kala baxaan, kaddbna naadiyada soo gudba ay iska soo xaadirin doonaan waddanka Portugal.
Sidee ayaa isku-aadka loo samaynayaa?
Saddex isku-aad ayaa dhacaya maanta oo kaliya. Isku-aadka hore waxa loo samayn doonaa wareegga siddeed-dhamaadka, midka labaadna waxa uu noqonayaa laba dhamaadka (semi-final)ka, halka midka saddexaadna yahay garoomada lagu ciyaarayo oo inkasta oo waddanka Portugal ay dhamaan kooxuhu joogaan haddana kooxna loo tixgelin doono inay hoygeedii joogtay midda kalena marti tahay.
Dhamaan kooxaha ayaa si siman loogu samaynayaa qori-tuurka, mana jiro sharci loo cuskanayo in naadiyada isku waddanka ah la kala ilaaliyo, taas oo ka dhigan in naadiyo isku dal ah ay isku beegmi karaan.